Road mshini, zisetshenziswa kahle, iklanyelwe ukunikeza abashayeli ugxile endleleni, ukuhlela izindlela traffic futhi ukhombise ithole isiqondiso kuzo zonke izinhlobo izimo zezulu. Ngakho, ukuthi bangene bagamanxe traffic real (kanye nabo ngezibonakaliso, amarobhothi). Lokhu kuvumela ukwandisa throughput isigaba endleleni ethile.
Ngokwesiko, kunezinhlobo ezimbili zama-ka yomdwebo isicelo:
1. Kuqondile umgwaqo mshini.
2. mshini umgwaqo evundlile.
Okokuqala-ke lisetshenzisiwe izinto zomgwaqo kanye nezakhiwo okwengeziwe senzelwe ilungiselelo kwemigwaqo. Lokhu kwaba ukuqala wenziwa kushintshana imidweshu omnyama nomhlophe (nge izakhiwo lembhali). Lokhu kukunika umshayeli ithuba ukuhlola izilinganiso izinto ebumnyameni, ezifana yokubeka izimpawu zomgwaqo, ibhuloho izisekelo, overpasses, iminyango zokuphuma imigudu, kanye curbs.
Eyesibili, esikhundleni salokho, sisetshenziswa ngqo roadbed. It wenza inani elikhulu imisebenzi ebalulekile, ezifana ukwehlukana womgwaqo, inkomba imingcele endleleni, izindlela traffic futhi zokupaka. Road wokugubha lolu hlobo band, imicibisholo, lettering, nezimpawu ukuthi lwenziwa ngu esikhethekile upende lembhali.
Ukumaka kumele kwenziwe ngokuqinile ngokuhambisana nemithetho yomgwaqo kanye nezinye izimiso, ezifana "Imithetho yomgwaqo wokugubha." Kulokhu, umgwaqo wokugubha futhi wonke umsebenzi ezihlobene eyenziwa ngokufanele abasebenzi abaqeqeshiwe futhi imishini ephambili.
Road wokugubha uhlobo ovundlile kungaba izinhlobo ezimbili: unomphela futhi yesikhashana. Permanent Ukumaka wenziwa ukusetshenziswa umile futhi ngokuvamile has a umbala omhlophe (izakhi ngabanye angasayindwa ziphuzi). Okwesikhashana isicelo ngesikhathi umsebenzi wokulungisa izinguquko short-term in the iphethini traffic. Okunjalo Ukumaka wenziwa upende orange. Sici Its ehlukile Kuyaphawuleka ukuthi izinto ukuthi yenziwa kalula demountable.
Okwamanje, mshini umgwaqo elenziwe tintfo letitinhlobonhlobo: upende lembhali, enamels, plastic Thermoplastic nokubanda, polymer tape Bobunjwa. Kabanzi reflectors. Noma kunjalo, zonke izinto zokwakha kumele ngempela baphile ngokuvumelana nezimfuneko zomthetho we amaphepha afanele, njengoba kuyintando izinkomba izinga kuzoncika ngqo impilo komgwaqo wokugubha.
Upende enamels - ezivamile ovundlile wokugubha impahla sebethule okuyinto inqubo elula futhi fast. Izindleko ongaphakeme umsebenzi, intengo elamukelekayo impahla edingekayo, okufutshane omiswe isikhathi, kanye nokwenzeka ukugqoka ngokuphelele zonke izinto - lokhu akulona uhlu oluphelele izinzuzo usebenzisa lezi zinto.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ukuthi umgwaqo wokugubha. Futhi izici zayo - akuyona imfihlo!
Bus "Matador": abashayeli Izibuyekezo ihlobo nobusika amathayi
Lexus 470 - isiphepho off-road
Izibani Ukuze Car
Kumatilasi Latex: ukubuyekeza amakhasimende futhi podiatrists
Ukuqondiswa kwezisebenzi kwenye indawo endaweni entsha yomsebenzi.
Female Iver Monastery, Samara: yokukhulekela, ikheli, ukubuyekezwa
Izinhlobo zezinwele ku long hair "wendlale", "isitebhisi" ngaphandle esiphongweni (isithombe)
Yezandla kusukela izintende ngezandla
Astrology. Igundane kanye Igundane: uthando ukuhambisana
Waterpark e Perm: yokuzilibazisa
Ukuhlanza ebusweni. Ukubuyekeza, izindlela okudingeka
Comedy for girls: i-movie 2013
Umuthi 'Genferon'. Yokusetshenziswa